January 6, 2022 - ApannPyay Media
အသက်အရွယ်အလိုက် သိသင့်တဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏတွေကို သင်သိရဲ့လား
January 6, 2022 by ApannPyay Media
အသက်အရွယ်အလိုက် သိသင့်တဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏတွေကို သင်သိရဲ့လား ? ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဘာရောဂါဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အများအားဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်ရပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ မကင်းနိုင်တာမို့ သေချာလေ့လာထားနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လူထုဆရာဝန်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အများပြည်သူ အားထားရသော （အခမဲ့）ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်ရန် ကြိုးစားလျှက်ရှိသည် ။မျှဝေပါ ကျန်းမာရေးပို့စ်ကို မိမိအကောင့်မှာ ရှဲခြင်းသည် မိမိအတွက်လည်း အချိန်မရွေး ပြန်ကြည့်နိုင်သလို အခြားသူများကိုလည်း ကျန်းမာရေးအသိပညာများပြန်လည်မျှဝေ လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်သည် ။ လူထုဆရာဝန် သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏ မျှဝေပါ pageကိုLike& Followလုပ်ပါ အသက္အရြယ္အလိုက္ သိသင့္တဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပမာဏေတြကို သင္သိရဲ့လား ? ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ ဘာေရာဂါဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္နဲ႔ မကင္းနိုင္တာမို႔ ေသခ်ာေလ့လာထားနိုင္ဖို႔ မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ … Read more
မျက်နှာ အဆီဖုလေးတွေကို ယူပစ်သလိုပျောက်တဲ့ ဆန်ဆေးရည်အစွမ်း မျက်နှာ အဆီဖုလေးတွေကို ကိုယ်တွေ့ ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ညီမအသားရေက combination အသားရေပါ အဆီဖုထွက်တယ်ဘာလိမ်းလိမ်းမပျောက်ဘူး ပျောက်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာဆန်နဲ့ပေါင်းတင်မှတစ်ပတ်လောက် ကျတော့သိသာလာတယ် ညီမမျက်နှာကညိုပါတယ် ညစ်လဲညစ်တယ်ဒါမဲ့ ဆန်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီတော့ မျက်နှာက ကြည်ပြီး g l o w လာတယ်မျက်နှာကတင်းတင်းလေးဖြစ်လာတယ် အဆီဖုတွေပျောက်သွားပါတယ် ဆန်ကိုလို သလောက်ယူပြီးပထမရေဆေးပြီး ဒုတိယရေမှာစိမ်ထားပါ ၁၅မိနစ်လောက်ဆန်ကိုကျောက်ပြင်ပေါ်မှာသနပ်ခါးတုးံနဲ့သွေးပြီးအနှစ်တွေရလာရင်မျက်နှာ၅မိနစ်၁၀မိနစ်လောက်ထားလိုက်ရေနဲ့ပြန်ဆေးချလိုက်ယုံဘဲနှာခေါင်းနားလေးတိုက် ရေနဲ့ပြန်ဆေးချလိုက်ယုံဘဲနှာခေါင်းနားလေးတိုက်စ်တွေရလာရင် မျက်နှာ၅မိနစ်၁၀မိနစ်လောက်ထားလိုက်ရေနဲ့ ပြန်ဆေးချလိုက်ယုံဘဲနှာခေါင်းနားလေးတိုက်လိုက်ရင်လဲ ဆားဝက်ခြံတွေသိသိသာသာပါးလာတယ်။ မျက်နှာ အဆီဖုလေးတွေကို ကိုယ်တွေ့ ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ညီမအသားရေက combination အသားရေပါ အဆီဖုထွက်တယ်ဘာလိမ်းလိမ်းမပျောက်ဘူး ပျောက်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာဆန်နဲ့ပေါင်းတင်မှတစ်ပတ်လောက် ကျတော့သိသာလာတယ် ညီမမျက်နှာကညိုပါတယ် ညစ်လဲညစ်တယ်ဒါမဲ့ ဆန်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီတော့ မျက်နှာက ကြည်ပြီး g l o w လာတယ်မျက်နှာကတင်းတင်းလေးဖြစ်လာတယ် အဆီဖုတွေပျောက်သွားပါတယ် ဆန်ကိုလို … Read more
သိထားသင့်တဲ့ အိမ်ဆောက်ရာမှာ သုံးသော သံချောင်း အတုအစစ်ခွဲနည်း
သိထားသင့်တဲ့ အိမ်ဆောက်ရာမှာ သုံးသော သံချောင်း အတုအစစ်ခွဲနည်း မြန်မာ့စကားပုံမှာ အတုကတထောင် အစစ်ကတယောက်ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အစစ်ဟာနာမည်ရလာပြီဆိုလျှင် အတုပေါင်းများစွာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အတုနှင့်အစစ်မှာ ဘယ်အတုကမှ အစစ်ထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလောကဟာအပြိုင်အဆိုင်များလှတဲ့လောကတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ဆိုတာ Red Ocean နဲ့ Blue Ocean ဆိုပြီးရှိနေတာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလောကဟာဆိုရင် Red Ocean ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမယ် Red Ocean ကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် Red Ocean ဟာ ဈေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်များပြီး အတိုက်အခိုက်များတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းဟာလဲ ဈေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်၊ ဝန်ဆောင်မှုအပြိုင်အဆိုင်ပြင်းထန်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သံချောင်းဈေးကွက်မှာ နိုင်ငံခြားကနေ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချတဲ့ Import သံချောင်းများရှိသလို၊ ဒီကစက်မှုဇုံမှာပဲ ထုတ်တဲ့ Local သံချောင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ သံချောင်းအတုအစစ်ကိစ္စကတော့ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ သံချောင်းတံဆိပ်များကို … Read more
ဟင်းခတ်မှုန့်အဖြစ် အသုံးပြုနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်နှင့် အထူးဂရုပြုသင့်သော ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် ၁၉၀၈-ခုနှစ်မှ စ၍ ဂျပန်ပါမောက္ခ ကီရာနအဲ အီကဲဒါဆိုသူက ဂျုံ၊ကြံ၊ ပီလောပီနံဥ၊ ရေညှိစသည့် သဘာဝပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဂလူတာမိတ်(GLUTAMAIE)ဓာတ်ကို ထုတ်လုပ်၍ ဆိုဒီယမ်ဆားတို့ ပေါင်းခံလိုက်သောအခါ ဟင်းခပ်လျှင် အရသာရှိသော MONOSODIUMGLUTAMATE) MSGခေါ်အချိုမှုန့်ကို ရသည်။ အဆိုပါအချိုမှုန့်ကို အာဂျီနိုမိုတိုဟု အမည်ပေး၍(AJINOMOTO) ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ချီလိုက်ရာ လူသားတို့နှစ်သက်စွဲလန်းသွားကြသည်။ နောက်ပိုင်း၌ ပီလောပီနံဥစသော သဘာဝပစ္စည်းတို့ကို အသုံးမပြုတော့ဘဲ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ဓာတုနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် ရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ အချိုမှုန့်အန္တရာယ်ကို ကမ္ဘာက သိလာကြသဖြင့် စီးပွားရေးသမားများက နောက်ပုံစံတစ်မျိုးနှင့် ဟင်းခပ်မှုန့်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးတပ်ထားကြသောကြက်သားမှုန့်တို့မှာ မူလအချိုမှုန့်များပါဝင်နေသဖြင့် အချိုမှုန့် ကြက်သားမှုန့်ကို ဓာတ်ခွဲလျှင် မိုနိုဆိုဒီယမ်ဂလူတာမိတ်ကို တွေ့ရ၏။ (MONOSODIUM GLUTAMATE)ကြက်သားအနံ့ဓာတုအရောင်တင်ထားသဖြင့် ပိုမိုအန္တရာယ်ဘေးဆိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ငါး၊ပုဇွန်၊ … Read more
မိမိအိမ်မှာ ထမင်း၊ ဟင်းတွေကျန်တဲ့အခါ ပြန်နွှေးစားတတ်ရင် ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပေးပါ
January 6, 2022 January 6, 2022 by ApannPyay Media
မိမိအိမ်မှာ ထမင်း၊ ဟင်းတွေကျန်တဲ့အခါ ပြန်နွှေးစားတတ်ရင် ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပေးပါ အစားအသောက် ချစ်သူတွေဟာ အစားအစာတွေ မကုန်တဲ့ အခါ လွှင့်မပစ်တတ်ကြပါဘူး။ ပြန်နွှေးစားတတ်သလို အအေးခံထားပြီး နောက်နေ့ ပြန်စားတတ်ကြပါတယ်။ မီးဖိုချောင် အလေအလွှင့် နည်းစေတဲ့ နည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစားအစာတိုင်းကို ပြန်နွှေးပြီးစားတဲ့အခါ ဆိုးကျိုးရှိတတ်တဲ့ အစားအစာ အချို့ ရှိနေပါတယ်။ ခေတ်မှီလာတဲ့ အခါ မိုက်ကရိုဝေ့တွေကို တွင်ကျယ်စွာ သုံးလာကြပြီး ပြန်နွှေးစားဖို့ ပိုပြီး လွယ်ကူလာပါတယ်။ Food Standards Agency ရဲ့ အစားအစာတွေကို စိတ်ချစွာ စားရဖို့ အတွက် အချက် ၄ချက်လိုကြောင်း ပြောထားပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ အဆိပ်အတောက် ကိုရှောင်ရှားခြင်းနဲ့ အေးစက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာတွေကို ချက်ပြုတ်ရာမှာ … Read more